Baafata banuuf furtuwwan DirqalaAlt+<underlined character> dhiibi. Bafata banamee keessaa, ajaja kaasuuf arfilee jala muraman dhiibi. Fakkeenyaaf, DirqalaAlt+I dhiibi, baafata Saagii banuuf, itti aansuudhan gabatee galchuuf T dhiibuu
Bafata halqara banuuf, Shift+F10 dhiibi. Bafata halqara cufuuf Esc dhiibi.
Kabalameeshaa Saagii banuuf Mul'annoo - Kabalameeshaalee - Saagii fili.
Hanga xiyyeeffannoon kabalameeshaa Saagii irraa ta'uti F6 dhiibi.
hanga sajoon Kutaa filamutti xiyyaa furtuu mirgaa dhiibi.
Furtuu xiyyaa gadaanu dhiibi, fi itti aansudhan dagalee kutaa saaguu barbaadu qindeessuf xiyyaa furtuu mirgaa dhiibi.
Qaree galmee keessa ka'uuf F6 dhiibi.
Barruu Gabatee Saaguu
Hanga xiyyeeffannoon kabalameeshaa Waltawaa irraa ta'uti F6 dhiibi.
hanga sajoon Gabatee filamutti xiyyaa furtuu mirgaa dhiibi.
Furtuu xiyyaa gadaanu dhiibi, fi itti aansudhan gabatee keessati dabaluuf lakkoofsa tarreewwanii fi tarjawwanii filuuf furtuu xiyyaa fayyadami.
Title is: Furtuuwwan qaxxamuraa(Barreeessaa $[officename] Saaqqatinaa)